Khin Maung Chin: (ငယ်ငယ်တုန်းက) ပန်းသီးဖီလင် ဇာတ်သိမ်း
14 July 2011 3:23 AM ♦♦♦တင်ပြတဲ့ငနဲက♦♦♦ KMC@ချင်းလေး
မဝင်...။ဒီခေါင်းကဘာလို့ဒီလောက်ကြီးရတာလဲဟု ကိုယ့်ခေါင်းကို ကိုယ်ပြန်ငြူစူမိသည်..။ပန်းသီးနံ့မွှေးမွှေးလေးကိုပင်ရှူလို့ရနေပေ
မစားနဲ့ဟေ့ကောင်..မစားဘူးလို့ပြောလိုက်....ကောင်လေးဆီမှအသံထွက်မလာ..တခုခုကိုကြံစည်နေပုံရ၏..။ ငါ ဗိုက်အရမ်းဆာနေလို့
''ဟင်း မေမေကလဲ..ဒါဆိုသားကို Happy World လည်းလိုက်ပို့ပေး..''
သန်းမောင်နှမြောတသစွာငေးနေမိသည်..။ကောင်လေး၏နှုတ်ခမ်းထောင့်စွန်းမှ ယိုစိးကျနေသောပန်းသီးရည်ကိုအဒေါ်ကြီးကတစ်ရှူးစလေးဖြင့်တို့သုတ်ပေး၏..။ သန်းမောင်ကကျလာသောမျက်ရည်ကိုလက်ဖမိုးဖြင့်ပွတ်သုတ်ပြီးထရပ်လိုက်လေ၏..။ အဒေါ်ကြီးကသန်းမောင်ကို
လှည့်ကြည့်ပြီးသနားဟန်ဖြင့်တွေသွားလေသည်..ထို့နောက်လက်ကိုင်အိတ်ကိုဖွင့်ကာမွှေနေလေရာ သန်းမောင်လည်းမသွားသေးပဲရပ်စောင့်နေမိသည်..။အဒေါ်ကြီးက ငါးဆယ်တန်တစ်ရွက်ကိုခေါက်လျက်ပစ်ပေးလိုက်လေရာသန်းမောင်လည်းကောက်၍ လှည့်ထွက်လာခဲ့လေတော့သည်..။
လက်ထဲကပိုက်ဆံကိုကျစ်ကျစ်ပါအောင်ဆုပ်ကိုင်ပြီး ပန်းသီးသည်ရှေ့တွင်သွားရပ်လိုက်၏...။ပန်းသီးသည်အဒေါ်ကြီးကမော့ကြည့်ပြီး ဘာလဲ ဟုမေး
''ဘာ...ပန်းသီးပေးပါဟုတ်လား? ငွေလေးငါးဆယ်နဲ့..ဟဲ့ ငါ့ပန်းသီးကချင်းသီး...တရုတ်သီးမဟုတ်ဘူးဟဲ့.သြစတေးလျသီး..တစ်လုံးကိုရှစ်ရာဟေ့..ရှစ်ရာ''
မိန်းမကြီး၏အော်သံ ကမ္ဘာပျက်မတက်ထွက်ပေါ်လာ၏..။ ဖြတ်သွားဖြတ်လာတွေကလှည့်ကြည့်ကြသည်...။သန်းမောင်ကတော့ဘယ်သူ့ကိုမှမကြည့်၊ဂရုမစိုက်ပဲ
အားကုန်ထုတ်ပြေးနေလေသည်..။ ဟုတ်တယ်...ပြေးရမယ်...ပြေး ပြေး..ပန်းသီးစားရအောင်ပြေးထား..၊ပန်းသီးလေးကချိုအေးနေမှာ..ရင်ထဲတွင်အားတွေ
ပြည့်လာသလိုခံစားနေရသည်...။ ပန်းသီးကို ဂွမ်းကနဲမြည်အောင်ကိုက်စားလိုက်မည်..။ ဆာနေသမျှ၊မောနေသမျှတွေပြေအောင်ပန်းသီးလေးကချိုအေးနေမည်
ပြေးနေသောခြေထောက်တွေက မြေကြီးထိသည်ဟုပင်မထင်ရ...။ သန်းမောင်လေထဲတွင်
လူတွေကဝိုင်းအုံကြည့်နေကြသည်..။ထိုအထဲမှလူကြီးတစ်ယောက်ကသန်းမောင်ကိုလည်ကုပ်မှကိုင်၍ မ ယူလိုက်လေသည်..။အပြေးအလွှားရောက်လာသော
မလှုပ်မယှက် ရပ်နေမိသည်... လေဟာပြင်ထဲမှာတစ်ယောက်ထဲကျန်နေခဲ့သလိုခံစားမိသည်..။ ဘယ်သူမှမရှိ၊ဘာမှမရှိ..။
တစ်ယောက်ယောက်ကပြောလိုက်တာဖြစ်မည်..။ အသံကဝေးကြီးမှလာနေသလိုလိုထင်ရသည်..။ဒါပေါ့..သွားရမှာပေါ့..တစ်လှမ်းချင်းလှမ်းနေမိသည်..။ သူ့အရိပ်ကသူ့ခြေထောက်အောက်တွင်ပြားကပ်လျက်လိုက်ပါလာသည်...။ သူ့နှာခေါင်းထဲမှစေးပျစ်ပျစ်အရည်တွေကနှုတ်ခမ်းပေါ်သို့စီးကျလာသည်...။ လျှာဖြင့်ထိုး၍လျက်လိုက်သည်..။ငန်ကျိကျိအရသာကိုသာရသည်..။
ရင်ထဲတွင်ပြည့်သွားသလိုခံစားရသည်...။သူ့ဗိုက်ကတကျုတ်ကျုတ်မြည်လာပြန်သည်..။ နောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ပြီးတစ်ကြိမ်လျှာဖြင့်လျက်၍ မြိုချနေမိသည်...။
သန်းမောင်၏စိတ်ထဲတွင်တော့ပန်းသီးသည်သွေးကဲ့သို့နီရဲပြီး သွေးသည်ပန်းသီးကဲ့သို့ဘာကြောင့်မချိုမြိန်ရတာပါလိမ့် ဟုအံ့သြနေမိတော့သည်...။
ဒီဝတ္ထုတိုလေးဖတ်ပြီးအရမ်းခံစားမိတယ်ဗျာ.ကျနော်တို့ငယ်ငယ်ကဘဝကိုပြန်သတိရမိတယ်..။ ဒီလောက်အခြေအနေမဆိုးပေမယ့် နီးစပ်လွန်းလို့ပါ..။
သူငယ်ချင်းများခင်ဗျာ..ခရီးတိုတစ်ခုထွက်ရမှာမို့တစ်ပတ်လောက်အပျောက်ရိုက်ပါရစေခင်ဗျာ. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တမျိုးမထင်ကြပဲ ဆက်လက်အားပေးနေကြလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်...။
♦♦♦အကြောင်းကတော့ဗျာ♦♦♦ ဇာတ်လမ်းတို3ယောက်ကဒီလိုအားပေးထောက်ပြခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Jul 14, 2011, 8:44:00 AM
တစ်ကယ်ပဲ ထိရောက်တဲ့ စာလေးပါ ကျေးဇူးမောင်လေးရေ....ပြန်လည်မျှဝေပေးလို့ အခုမှဆုံးအောင် ဖတ်ပြိးပြီဆိုတော့ ညကျရင်တော့ စိတ်ချလက်ချ အိပ်ပျော်ပြီ..:)
Jul 14, 2011, 10:19:00 AM
ကောင်းတဲ့စာတွေကို မျှဝေပေးလို့ ချင်းကလေးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်...
Jul 14, 2011, 2:41:00 PM